अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी किन प्रभावशाली हुँदैन ? - Jhilko
अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी किन प्रभावशाली हुँदैन ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्ट’ को आफ्नो चुनावी नीति अनुसार इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई अगाडि बढाए । विश्वको उदीयमान दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनलाई सहजतासाथ अगाडि बढ्न नदिने परम्परागत शक्ति संघर्षको नीति अनुसार व्यापार युद्धमा अमेरिकाले तानिसकेको छ ।
दुनियाँमा अर्ब जनसंख्या नाघिसेकका र दु्रतगतिमा उदीयमान दुई देश चीन र भारतबीच रहेको नेपालको भूराजनीतिक महत्वलाई बुझेर इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा फसाउन अमेरिकाले भरमग्दुर प्रयास गरिआएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणबाट नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा अमेरिकाले चाहे अनुसार फस्न नसक्ने देखिएको छ । मित्र देशको रूपमा नेपालले अमेरिकासँगको साझेदारी गर्न खोजेको संकेत यो भ्रमणबाट दिएको देखिएको छ ।
नेपालकै भूमिबाट चीनलाई टुक्र्याउन खोज्नेलाई धूलोपिठो पारिदिने चेतावनी पनि राष्ट्रपति सीले दिए । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताका लागि चीन सदैव सहयोगी हुने बताउँदै सीको यो चेतावनीले कुटनीतिक रूपमा नेपालमाथि बाह्य प्रभावलाई न्यून गर्न खोजिएको विषय बुझ्न गाह्रो नभएको कुटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ ।
अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिकका लागि भारतलगायत दक्षिण पूर्वका एसियाली देशहरुको समर्थन र सहयोग दरो रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । भारतको चीनसँगको व्यापार घाटा ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको छ । भारतका लागि यो व्यापार घाटा त्यति चासोको विषय रहेको छैन् । भारतको आन्तरिक उद्योगको क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता महत्वपूर्ण विषय हो ।
भारतका विदेश सचिव विजय खोखलेले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् । उनले आन्तरिक उद्योगमा केही विषय संवेदनशील रहेको सीको भ्रमणका बारेमा बोल्ने क्रममा भनेका थिए ।
औपचारिकरूपमा सीको भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच केही सम्झौता भएको छैन । तर, सी र मोदी दुबैले उत्पादनमुुलक क्षेत्रको साझेदारी प्रस्ताव गरिएको संयन्त्रको मार्फत गर्ने विषयमा सहमत भएको गोखलले जनाएका छन् ।
यो संयन्त्रले दुबै देशमा विशेष उद्योगको पहिचान गर्ने र रोजगार वृद्धि गर्ने गरी लगानी विस्तार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदी सहमत छन् । यसका लागि आइटी पेशकर्मीको भिसाका लागि यो नयाँ संयन्त्रले बाटो खोल्ने छ ।
क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारी (आरसीइपी) सम्झौतामा दक्षिण पूर्व एसियाका १० र यसका साझदोर चीन र जापानका साथ भारतले हस्ताक्षर गर्नेबारे गोखले जनाए । यसलाई मोदीले सन्तुलित सम्झौता भनेका छन् । यी देशहरू सामेल भइ हुने यो सम्झौताले अन्य केही नभए पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी बलियो हुन नसक्ने देखिएको छ । गोखलेका अनुसार चीनले भारतका चासोहरूलाई ध्यान दिनेछ । चीन र भारतले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको विकास र समृद्ध पार्न सहमत भएको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली खुला र समावेश गर्ने प्रकृतिको हुने र यसमा सहभागी हुने देशहरूलाई लाभ हुने सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।भारतसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीन आउने निम्तो गरी फर्केका छन् ।साथै मोदीलाई तेस्रो अनौपचारिक शिखर सम्मेलनका लागि सीले समेत निम्तो गरेका छन् ।
भारत र चीनबीच रक्षा सम्बन्ध विस्तार र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको विस्तारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी बलियो भन्नेमा शंका रहेको विज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ । अर्कोतर्फ अमेरिकाले नेपालको सन्दर्भमा यो रणनीति नभई नीति भएको जनाएपछि यो तत्काल कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
देउवा र सिटौलाबीच अझै साँठगाँठ !
जनकपुरमा गोली प्रहार, एकको मृत्यु
सेनाद्वारा कालीगण्डकी करिडोरको ३० किमी सडकखण्ड हस्तान्तरण
छिमेकी भारत र चीनलाई जोड्न छोटो मार्ग मानिने निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी...
व्यवस्थापनको काममा नेपाली स्थायी कर्मचारी बढी खटिनुपर्ने भए पनि बढी सेवा सुविधा...
चीनमा रहेका विद्यार्थीका अभिभावकको धर्ना
आज दिउँसो उनीहरुले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्ना छोराछोरीलाई नेपाल ल्याउन माग गर्दै धर्ना...
दुर्घटनाले देश नै दुखिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा एउटा मात्र ब्यक्तिको मृत्युले पनि...